August 2017 - Ceelhuur Online
Farmaajo & Kheyre oo ku Cadaadinaya Sanbalolshe inuu iscasilo
August 31, 2017 admin257
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan dowlad itoobiya u Gacan galisay Halgamaa CabdiKariin Sheekh Muuse QalbiDhagax oo ka mid ahaa saraakiisha Ururka Xoreynta Soomaali Galbeed ONLF. Sidoo kale wasiirka Warbaahinta dowladda itoobiya ayaa xaqiijisay in Qalbidhagax loo gacan galiyey, ayna sharciga la horkeeni doono. Arintan ayaa wajigabax ku noqotay Madaxda ugu sareysa Soomaaliya. Dhanka kale ilo xog-ogaal […]
Itoobiya oo xaqiijisay in Somalia u gacangalisay Qalbi-Dhagax
August 31, 2017 admin159
Dowladda Ethiopia ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay in dowladda Soomaaliya ay u soo gacan galisay sarkaal ka tirsanaa ururka ONLF oo toddobaadkii hore la sheegay in lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Dr. NEGERI Lencho, wasiirka arrimaha warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa wareysi uu siiyay qeybta Afka Amxaariga ee idaacadda VOA ku sheegay in dowladda Somalia ay usoo […]
3 Dhacdo oo M. Farmaajo ku waayey taageerayaal badan W/Q: Cali-Daahir Yariisow
August 31, 2017 admin266
SADEX DHACDO OO MADAXWEYNE FARMAAJO UU KUWAAYEY TAAGEERO YAAL BADAN . 1.Dilkii Wasiir cabaas siraaji , Arrinka la xariirta dilkii wasiir cabaas dowladu waxay ka qaadatay go’aan dag dag ah, kaas oo keenay in xilka laga qaado hati dhowrihii qaranka , kadibna uu isaguna ku gacan seeyray. Ma jirin baarintaan dheeri ah iyo dib u eegis […]
Muqdisho:Dadkii Lagu Xasuuqay Bariire oo Maanta la aasay
August 31, 2017 Cali Yare208
Shacabkii lagu xasuuqey Bariire ayaa maanta salaada janaasada lagu tukadey waxaana lagu aasey Qabuuraha isbitaalka Madiina Xildhibaano iyo Senator ka tirsan Aqalka sare, odayaasha iyo ehelada dadkii laga dilay ayaa ka qeyb galay aaska. Dowladda Soomaaliya iyo odayaasha ayaa isku afgartay in meydadka la aaso, isla markaana la bixiyo magdhaw, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in […]
Taliye Sanbaloolshe oo Kheyre ha hor joogsaday ka hadalka Arinta (Qalbi Dhagax)
August 31, 2017 Cali Yare154
Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa markii u horeysay qiray in dowladda wareejisay Sarkaalkii ka tirsanaa ONLF oo maalmo ka hor loo gacan geliyay dowladda Itoobiya. Sanbaloolshe ayaa si lama filaan ah uga dafay Ra’iisul Wasaaraha su’aal la weydiiyay oo ku saabsaneyd arrinta Sarkaalka ONLF C/kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax […]
August 31, 2017 Cali Yare155
Waxaa magaalada Muqdisho xalay ka dhacay kulan loogu magac daray “Maqal Dadkaaga” kaas oo xukuumadda Ra’isul wasaare Xasan Kheyre ku sheegtay isla xisaabtan u dhaxeeya golaha wasiirrada iyo warbaahinta, marka laga soo tago qabsoomidda kulanka halkaasi kama dhicin wax isla xisaabtan ah, waxaa ay xukuumadda heshay fursad ay ku suuq-geyso fikradaheeda, warbaahintana waxaa ay meesha […]
August 31, 2017 Cali Yare147
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka dhawaajiyay in is bedel lagu sameyn doono xilalka 26 Agaasime Guud ee Wasaaradaha, isagoo tilmaamay in boosaskaas la xayeysiin doono. Ra’iisul Wasaaraha ayaa xalay ka qeyb galay Barnaamijka Kulanka Saxaafadda iyo Xukuumadda oo su’aalo lagu weydiinayay, wixii u qabsoomay Xukuumaddiisa iyo balan-qaadyadii ay sameysay. Kheyre ayaa sheegay […]
August 31, 2017 Cali Yare184
Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay waxa ka jira in doonayo isku shaandheyn uu ku sameeyo golihiisa wasiirada. Kheyre oo ka qeybgalayey kulan su’aallo weydiin ah ayaa u sheegay wariyahii su’aashaasi weydiiyey iney tahay arrinkaasi markii ugu horreysay oo afkiisa uu ka maqlo, taas oo ka dhigan inaanay jirin wax isku […]
Sacuudiga Oo Xajka Ka Celiyey Dad Gaaraya 400 Kun Oo Qof
August 31, 2017 Cali Yare157
Mas’uuliyiinta Sacuudiga ayaa sanadkaan celiyey ku dhawaad 400kun oo qof oo xujey ah kuwaas oo aan wadanin ogolaasha xajka si ay ugutaan acmaasha xajka. Sanad walba waxaa guta acmaasha xajka in ka badan hal-malyan oo xujey ah kuwaas oo ka kala yimaado daafaha caalamka. Sanadkaan ayaa sidoo kale waxaa loo ogolaaday xajka xujeyda u dhalatay […]
Ugu yaraan25 ruux oo ku dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho
August 31, 2017 Cali Yare141
Ugu yaraan 25 ruux oo saarnaa gaari nooca xamuulka qaada ah ayaa ku dhaawacantay kadib gaarigii ay saarnaayeen uu ku rogmaday meel u jirta3km magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle. Gaarigan ayaa ka yimid degmada Aadan Yabaal waxana uu ku sii jeeday magaalada Muqdisho, dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa badankood loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho […]